N'etiti nrọ, nke Elio Quiroga dere
Mgbe Elio Quiroga ọ na -abanye n'ụwa sinima, nchịkọta abụ ya na -apụtakwa n'ụzọ ahụ site na nchịkọta akụkọ nke onye edemede ọ bụla ma ọ bụ onye na -ede uri.
Mana ikwu maka Elio Quiroga taa bụ ịtụle onye okike dị iche iche, onye na -ede uri, onye na -ede akwụkwọ na onye na -ede akwụkwọ akụkọ nwere nzụlite sitere na nhọpụta Goya ruo nrite Minotauro a na -akwanyere ùgwù nke 2015, nke na -anọchi anya ọrụ kacha mma Fantasy ma ọ bụ sayensị akụkọ ifo nke afọ na Spain. .
Ma ọ bụ kpọmkwem na mpaghara akụkọ ifo ma ọ bụ akụkọ sayensị na -emecha bụrụ ubi na -eme nri nke echiche nwere ike na -etolite mgbe ọkara n'etiti akụkọ na sinima.
N'ebe ahụ anyị na -ahụ akwụkwọ akụkọ ọhụrụ a n'etiti nrọ.
Ọ dịghị ihe dị mma karịa ebe dị ka Canary observatory nke Roque de los Muchachos, nke nwere otu telescopes kachasị ike n'ụwa, iji isi okwu claustrophobic wee cheta ihe nkiri a. "Ọkụ" na n'otu oge ahụ na -ejedebe na atụmatụ na -ekwu maka akụkọ sayensị a nwere ike ịnweta karịa, nke anyị niile ndị na -akwụsị oge ụfọdụ iji hụ kpakpando n'anya.
Sonia na Juan na -eme ezigbo ọkachamara na di na nwunye onwe ha. Ha abụọ hụrụ astrophysics n'anya na gburugburu agụụ ahụ, ha mekwara ịhụnanya nke jikọtara ha ọnụ ruo mgbe ebighi ebi.
Naanị site na oke nke "ruo mgbe ebighi ebi", yabụ n'ikwekọ na ụwa na -enweghị ngwụcha, na -ejedebe akụkọ na -atọ ụtọ nke na -achịkọta enweghị nchekasị, aghụghọ, ezigbo oke ụjọ na usoro ihe nkiri nke onye nduzi ihe nkiri tụgharịrị.
N'ihi na akpọghị Robert oku ka ọ gaa '' ezumike ezumike ezumike '' na teliskop dị na La Palma, ebe di na nwunye ahụ na -akwado ịmalite ọrụ ga -eme ka ha nọrọ naanị ha ruo ọtụtụ ụbọchị. N'agbanyeghị nke ahụ ọdịdị ya na -atụghị anya ya bụ njedebe maka Sonia na Juan.
Ebe ọ bụla ọnụnọ ahụ nke chọrọ isonyere ha na nyocha nke otu kpakpando siri bịa, ọ kwụsịrị na nrọ Juan, ruo mgbe ọ nwetara ọtụtụ ngwugwu site n'aka onye o mere ọbịa ya.
Ị nwere ike zụta akwụkwọ akụkọ Entre los Sueños, akwụkwọ ọhụrụ nke Elio Quiroga dere, ebe a:
Tags Elio Quiroga, Novelties na akwụkwọ akụkọ, Akwụkwọ akụkọ ifo sayensị